Ganacsiga – Bandhiga
Home Category Ganacsiga
Wasaarada Ganacsiga oo kala dirtay mamulka Rugta Ganacsiga G/Banaadir
Wasiirka ganacsiga"Soomaaliya way ka baxday xilligii la kaalmeyn jiray"
Wasiirka Ganacsiga iyo warshadaha dalka ENG. Cabdullaahi Cali ayaa daahfuray Madasha ganacsiga Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa xusay in laga gudbay xilligii Soomaaliya la kaalmeyn jiray islamrkaana hadda la joogo waqtigii...
Somaliland iyo DP World oo heshiis cusub kala saxiixday(Sawirro)
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa si rasmi ah u daah-furay mashruuc ballaadhan oo lagu hirgelinayo Aagga cashuuraha ka caaggan ee dekedda Berbera oo maanta lagu kala saxeexday Somaliland....
Aqalka sare oo meel-mariyay sharciga canshuuraha Furdooyinka
Xubnaha Aqalka Sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa arbacada maanta ah magaalada Muqdisho ku sheegay kulankii 21aad oo kamid ah falfadhiga 6aad ee gollahaasi. Kulanka oo uu shirguddoominayay guddoomiye ku xigeenka...
Gollaha shacabka oo isku raacay ku noqoshada miisaaniyadda 2019
Baarlamaanka Somalia oo Ansixiyey ku noqoshada qoondada Miisaaniyadda Dowladda 2019-ka. Xildhibaanada Golaha Shacabka BJFS oo maanta yeeshay kulankooda caadiga ahaa ayaa waxaa soo xaadiray kalfadhigii 141 Mudane, iyadoo uu Kulanka...
DHAGEYSO: Saameynta burburka wadada Muqdisho iyo Jowhar
Iyadoo maalmihii u dambeeyey ay inta badan gobalLada dalka uu ka da'ay roobka xooggan ayaa waxa ay saameeyeen isu socodka dadka iyo gaadiidka meelo kamid ah dalka. Darawallada, Ganacsatada iyo...
Soomaaliya oo billoowday dhoofinta Muuska dalka (Sawirro)
Wasiirka Beeraha Soomaaliya oo ay wehliyeyn Wasiir ku xigeenka Dekedaha, Guddoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga, Xubno ka socday mashruuca GEEL , ayaa Maanta Daah-furay mashruuca dhoofinta Muuska/Mooska. Wasiirka Beeraha iyo...
MW Somaliland oo soo bandhigay fursadaha maalgashi ee jira
Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay seddex qoddob oo gobolka ku gaari karo Hodantinimo dhaqaale. Sidaasna waxa lagu sheegay warbixin ay maanta soo xigatay Wakaaladda Wararka Somaliland...
DP World "50% ayaa kordhinay shixnadaha konteenarrada Berbera"
Shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee DP World ayaa ka hadashay halka ay marayaan howlaha ay ka waddo dekadda magaalada Berbera. Waxaa ay shirkaddu sheegtay inay Boqolkiiba Konton kordhiyeen...
Shirka looga tashanayay sharciga shirkadaha dalka oo soo idlaaday
Shirka ka tashiga hindise sharciyadeedka shirkadaha Dalka oo u dhaxeeya Guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha Golaha Aqalka sare iyo maamul Goboleedyada Soomaaliya ayaa Xalay lagu soo gaba-gabeeyay Magaalada Garoowe. Shirka ayaa...
Shir maalinkii 2aad Garoowe uga socda DF iyo maamullada
Magaaladda Garoowe ee Caasimadda Puntland waxaa maalinkii labaad ka socda shirweyne looga hadlayo Xeerka Ganacsiga Soomaaliya. Shirka oo ay soo qabanqaabisay dowladda federaalka waxaa hoggaaminaya wasiirka ganacsiga ENG. Cabdullaahi Cali...